Buy Apartment Rent (ID-247) (700,000Ks) in မင်္ဂလာတောင်ညွန့် on ipivi.com
Apartment Rent (ID-247)
1327 sqft apartment rent in Kandawlay , Mingalar Taung Nyunt Township. Apartment has Living-room, One Master Bed-room, Kitchen and Bath-rooms. The monthy rent price of apartment is -7Lks (Nego)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ကန်တော်လေးရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ ၁၃၂၇ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းများဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တိုက်ခန်း၏လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၇သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန် တိုက်ခန်း (ID-247)
အမည်: Apartment Rent (ID-247)